Maxaad ka ogtahay Burundi? - BBC News Somali
Maxaad ka ogtahay Burundi?
25 Juunyo 2012
Image caption Ciidan ayaa Burundi ka joogo Somalia
Burundi waxa lagu tirayaa in ay ka mid tahay shanta waddan ee ugu saboolsan dinida. Waxa kunool dad lagu qiyaasay 10 milyan waxaana soo maray dagaaladdii sokeeye kuwii ugu darnaa ee ka dhacay waddamada ku yaala gobolka Harooyinka Waaweyn ee Briga Afrika.
Muddo ka badan 10 sanno ah, ayaa waxa ku dagaalamayey fallaago iska soo horjeeda, balse wixii ka dambeeyey 2003-dii oo heshiis nabadeed lagu saxiixday Magalaada Arusha ee dalka Tanzania, Burundi waxa ay cagta saartay dhabaddii xasiloonida
Todobaadkan waxa la isku diyaarinayaa xuska sannad guuraddii 50-naad ee ka soo wareegtay tan iyo intii uu waddanka xoriyadiisa ka qaaday maamulkii gumeysiga ee Belgium 1962-ddii
Xus kan la mid ah waxa uu ka dhici doonaa dalka deriska la ah ee Rwanda.
Waddooyinka caasimada Bujumbura, waxa laga dareemayaa isbadel ballaaran. Waxa la nadiifinyaa waddooyinka, waxa dib loo rinjiyeynayaa dhismooyinka, iyadoo howshani ay ku baxayso malaayin doolar.
Madaxweynaha dalkaasi Pier Nkurunziza ayaa todobaadkan hor kacay howsha lagu naadifinaayo waddooyinka waxaana la filayaa in marti sharaf badan oo isagu jira madaxweynayaal, dibloomasiyiin iyo dad caan ah ay ka soo qeyb galaan xuska sannad guuradda 50 oo lagu wado in ay dhacdo 1-da bisha July.
Image caption Calanka Burundi
Farxada xuska sannad guurada 50-naad waxa laga dheehan karaa wajiyada dadka kunool caasimadda Bujumbura, waa magaalo ay ku hareeraysnyihiin buuro waaway. Safar ayaan u galnay Magaalo la yiraahdo Bugarama oo qiyaastii 35 km dhinaca waqooyi ka xigta caasimadda.
Xilliggii ay socdeen dagaaladu, magaaladan waxay ahayd jiida hore ee dagaalka. Waxay ahayd albaadka laga soo galo caasimada, ciddii ay gacanta u gasho ayaana maamuli jirtay caasimada. Waddada gasha magaaladan waa mid laab laabatiin badn leh waxaana lagu dhul sameeyey buuro waaweyn oo xitaa marka aad baabuurka kaxeneyso haddii aadan taxadar muujin waxa halis ah in aad gebi ka dhacdo..
Magaalada Bugarama, waxay astaan u tahay guusha ay gaartay Burundi wixii ka dambeeyey heshiiskii nabadeed, waayoo magaaladani waxay haatan noqotay isha ugu weyn ee ay caasimadu ka hesho qudaarta iyo dalaga kale ee la beerto.
Marka laga hadlayo taarikhada waddamada ku yaala gobolka Harooyinka Waaweyn waxa si aad ah isu shabaha Burundi liyo Rwanda oo labaduba soo maray gumeysigii awoodihii belgiyamka iyo Jarmalka oo muddo ka badan 200 oo sanno maamulayey.
Waxa ku wada nool waddamadan qabaa'ladda Hutuuga liyo Tutsiga oo si xun isugu laayey labada dal.
1994-kii diyaarad ay wada sarnayeen Madaxweynahyaasha labada dal ayaa waxa lagu soo riday caasimada Kigali ee Rwanda, dhacdadaas oo hor seeday xasuuqii ka dhacay Rwanda oo ay ku dhniteen ku dhowaad hal milyn oo qof.
Sannad guuradan kontanaad ee laga xusayo labadan dal, waxa laga dheehan karaa cashiro muhiim ah siiba dib u heshisiinta iyo in lagu tallaabsado dhinca nabada iyo horumarka